Umntwana KaThixo Isibhalo: UThixo Uyabona Kanjani
Ungumntwana Othandekayo KaThixo
Ininzi yolonwabo lwakho ebomini kuxhomekeke kwindlela ocinga ukuba uThixo uyakubona. Ngokudabukisayo, abaninzi bethu banengcamango engalunganga yombono kaThixo ngathi . Siyisekele kwizinto esiye sazifundiswa, amava ethu amabi ebomini, kunye nezinye izinto ezinokucinga. Sinokucinga ukuba uThixo udaniwe kuthi okanye ukuba asisoze silinganisa. Singaqiniseka ukuba uThixo uxhalabile ngenxa yokuba sizama njengokuba sinako, asikwazi ukuyeka ukwenza isono. Kodwa ukuba sifuna ukwazi inyaniso, kufuneka sihambe kumthombo: uThixo ngokwakhe.
Wena ungumntwana othandekayo kaThixo, isibhalo sithi. UThixo uxelela indlela akubona ngayo kwisigidimi sakhe kubalandeli bakhe, iBhayibhile . Into ongayifunda kula maphepha malunga nolwalamano lwakho kunye naye ayiyinto emfutshane.
Umntwana onyanisekileyo kaThixo
Ukuba ungumKristu, awukho uhlanga kuThixo. Awuyinkedama, nangona ngezinye izihlandlo uvakalelwa yedwa. UBawo wasemazulwini uyakuthanda kwaye ubona njengomnye wabantwana bakhe:
"Ndiya kuba nguBawo kuni, nibe ngabantwana bam neentombi, utsho uYehova uSomandla. (2 kwabaseKorinte 6: 17-18, NIV)
"Mkhulu kangakanani uthando uBawo alubekele lona, ​​ukuba simele sibizwa ngokuba ngabantwana bakaThixo! (1 Yohane 3: 1, NIV)
Kungakhathaliseki ukuba uneminyaka elingakanani, kuyathuthuzela ukwazi ukuba ungumntwana kaThixo. UngoBawo onothando, okhuselayo. UThixo, ohlala kuyo yonke indawo, uhlala elindile kwaye uhlala ekulungele ukuphulaphula xa ufuna ukuthetha naye.
Kodwa amalungelo awayeki apho. Ekubeni uwamkelwe kwintsapho, unamalungelo afanayo noYesu:
"Ngoku ukuba thina singabantwana, ngoko thina sizindlalifa - iindlalifa zikaThixo kunye neendlalifa kunye noKristu, ukuba ngokwenene sihlanganyela kwiintlungu zakhe ukuze nathi sihlanganyele nozuko lwakhe." (Roma 8:17, NIV)
UThixo Uyabona Uxolelwe
AmaKristu amaninzi ahlaselwa phantsi komthwalo onzima wecala , eyika ukuba adidekile kuThixo, kodwa ukuba uyamazi uYesu Kristu njengoMsindisi, uThixo ubona uxolelwe. Akaboni izono zakho zangaphambili kuwe.
IBhayibhile icacile kule ngongoma. UThixo uyakubona njengelungileyo kuba ukufa koNyana wakhe kukuhlambulule ezonweni zakho.
"Uxolela kwaye ulungile, Nkosi, ugcwele uthando kubo bonke ababizayo kuwe." (INdumiso 86: 5, iNIV)
"Bonke abaprofeti bafakazela ngaye ukuba wonke umntu okholwa kuye ufumana ukuxolelwa kwezono egameni lakhe." (IZenzo 10:43, NIV)
Awunakukhathazeka ngokuba ungcwele ngokwaneleyo kuba uYesu wayeyingcwele ngokupheleleyo xa ehamba emnqamlezweni egameni lakho. UThixo ubona uxolelwe. Umsebenzi wakho ukwamkela eso sipho.
UThixo Uyabona Njengokusindiswa
Ngamanye amaxesha unokungabaza ukusindiswa kwakho, kodwa njengomntwana kaThixo kunye nelungu losapho lwakhe, uThixo uyakubona usindisiwe. Ngokuphindaphindiweyo eBhayibhileni , uThixo uqinisekisa abazalwana kwimeko yethu yokwenyani:
"Bonke abantu baya kukuthiya ngenxa yam, kodwa lowo omelele ukuphela uya kusindiswa." (Mateyu 10:22, NIV)
"Wonke umntu obiza egameni leNkosi uya kusindiswa." (IZenzo 2:21, NIV)
"Kuba uThixo akasimisele ukuba sibe noburhalarhume kodwa ukufumana usindiso ngeNkosi yethu uYesu Kristu ." (1 Tesalonika 5: 9, NIV)
Awunakuzibuza. Akufanele ubalekele kwaye uzama ukufumana usindiso lwakho ngemisebenzi. Ukumazi ukuba uThixo uyasindiswa kuyamangalisa. Ungaphila ngovuyo kuba uYesu wahlawula isigwebo sezono zakho ukuze uchithe ngonaphakade noThixo ezulwini.
UThixo Uyabona Njengoko Unethemba
Xa ihlelwe yintlekele kwaye uzive ngathi ubomi buvala kuwe, uThixo ubona wena njengomntu wethemba. Kungakhathaliseki ukuba imeko ibuhlungu kangakanani, uYesu unawe kuyo yonke into.
Ithemba alisekelwe kwinto esinokuyenza ngayo. Isekelwe kuLowo esinethemba kuye - uSomandla uSomandla. Ukuba ithemba lakho libuthathaka, khumbula, umntwana kaThixo, uYihlo unamandla. Xa ugcina ingqwalasela yakho igxile kuye, uya kuba nethemba:
"Ngokuba ndiyazi izicwangciso endinalo kuwe, utsho uYehova, uthi, Uceba ukuba uphumelele, ungabi kukulimaza, uceba ukukunika ithemba nekamva." (Yeremiya 29:11, NIV)
"UYehova ulungile kwabo ba nethemba kuye, kuye lowo umfunayo;" (IsiLilo 3:25, i-NIV)
"Masibambe ngokungathembeki ithemba elithethileyo, ngokuba lowo uthembisayo uthembekile." (Hebhere 10:23, NIV)
Xa uzibona njengoko uThixo akubona, inokutshintsha yonke imbono yakho ebomini. Akukratshi okanye kukungazi nto okanye ukuzilungisa. Yinyaniso, ixhaswa yiBhayibhile. Yamkela izipho uThixo akunike zona. Phila ukwazi ukuba ungumntwana kaThixo, uthanda ngamandla kwaye uyamthanda.
IiBuddhist Holidays 2017
Shaolin & Wudang Izitayela ze-Kung Fu
I-Butter Longhorned Beetle (i-Anoplophora glabripennis)
Imidlalo yeBhayibhile yabaselula
Uluhlu lweeMigangatho yezobuGcisa kunye neenkcazo: UkuPasa kweeMpawu
Ukungathathi hlangothi kwe-US Imisebenzi yee-1930 kunye noMthetho wokuThengisa ukuThengisa
IAA Milne Ipapasha uWinnie-the-Pooh
Inkqubo yoHlelo lweeMculo zoMculo
Amaqela eenqanawa zaseNtaliyane anamaNicknam
I-Cicero Yathini Ngenkxwaleko yeDamocles?
Iingcebiso ezinhlanu zeengqondo zokuThengisa
Indlela yokudibanisa "Ukusabalalisa" (ukulahleka) ngesiFrentshi